By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Thursday, 10 Oct 2019 09:41 AM / 0 Comment / 48 views
Maxamed Cali Afgooye oo ah Hanti dhowraha guud ee Dalka ayaa shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay Muqdisho waxaa uu faah faahin kaga bixiyay warbixin sanadeedkii 2018 ee uu dhawaan shaaciyay.
Hantidhowraha waxaa uu sheegay in warbixinta uu xafiiskiisu siidaayay aysan marna ku jirin lacag la lunsaday hayeeshee dad dano gaar ah ka leh arrintaas ay si khaldan u fasireen.
Waxaa uu sheegay in adduunka oo dhan ay ka jirto marka warbixinnada noocan ah ay soo baxaan in dadku ay siyaabo kala duwan uga hadlaan islamarkaana dano gaar ah ka fiirsadaan.
Dadka qaar ayuu ku dhaliilay in aysan warbixinta si fiican u aqrin ee ay kaliya ka qaateen qeybaha xumaa islamarkaana ay taas qeyb ka tahay dhibaatada dalka ka jirta.
Warbaahinta iyo dadweynaha Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay in ay warbixinta u aqristaan islamarkaana dhameystaan.
Dowladda Federaalka ah ayuu sidoo kale ugu baaqay in Warbixintaas ay uga faa’ideystaan heerka maamulka maaliyadda dalka islamarkaana si wanaagsan loogu dhaqmo xeerarka dalka.
Warbixintii ka soo baxday Hanti dhowrka guud ee dalka ayaa waxaa ku jirtay lacagaha soo galay dowladda, sida loo maamulay iyo sidoo kale xisaab celin la’aanta inta badan hay’daha axafiisyada dowladda ay sameeyeen 2018.
Lacagaha $18Milyan ah ee maqan ayuu sheegay in aysan ku jirin hanaanka Maaliyadda Dowladda Soomaaliya ee ay ku jirto Bangi akoon ay dowladda dibadda ku leedahay taasna aysan ahayn lacag la lunsaday ee ay ku jirto akoon ka baxsan gudaha dalka, qorshuhuna yahay in la soo wareejiyo loona soo wareejiyo hay’adaha maaliyadda ee dalka.
Sanadkan 2019 ayuu sheegay in hanaanka lacagaha Soomaaliya ay guud ahaan mari doonaan Bangiyada lagana gudbay habkii hore ee lacagaha caddaanka ah gacanta la isku saari jiray.
Lacagaha ku jiray warbixinta Hanti dhowrka waxaa ka mid ahayd lacagaha deeqaha ah,waxaana ay u dhigneyd sidan;
KAALMO DIBADEED OO LA WAAYEY MEEL AY KA BAXDAY:
– Midowga Yurub (EU) wuxuu ku wareejiyay Wasaaradda Maaliyadda lacag dhan $17,004,816 laakiin warbixinta maaliyadeed ee sannadkaas oo la soo bandhigay waxay sheegtay kaliya $13,266,667.
– Lacag ka timid Sacuudi Carabiya oo haraageeda billowgi sannadka 2018 ahaa $20,000,000 (million) ayaa iyadana $ 6,070,868 ka mid ah lagu soo bandhigay warbixinnada maaliyadeed ee 2018, taasoo ahayd intii lagu soo shubay Khasnada Dhexe ee Dowladda, halka inta kale ee $ 13,929,132 oo taaley xisaab-socoto ka furan bangi
Turkiga ku yaalla aan lagu xusin warbixinnada maaliyadeed ee 2018.
– UNPOS waxay Wasaaradda Maaliyadda ku wareejisay lacag dhan US $1,254,743, laakiin xisaabaadka Wasaaradda Maaliyadda waxaa laga heley oo kaliya lacag dhan $535,292 isla sannadkaasna lagu soo shubay Khasnada Dhexe ee Dowladda.